99W « MMWeather Information BLOG
By mmweather.ygn, on August 27th, 2014%
သြဂုတ်လ ၂၇ ရက် – မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၁၈း၃ဝ နာရီအထိ ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်မှ ကြိုတင်ခန့်မှန်းပုံအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်အလယ်ပိုင်းနှင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတို့တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST SYSTEM များ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပြီး အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားကြမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
လေဖိအားနည်းဆဲလ်များသည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး မုန်တိုင်း ဖြစ်လာနိုင်မည့် အခြေအနေမရှိကြောင်း၊ ဤ ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနှင့် ဧရာဝတီမြစ်ရိုးတစ်လျှောက်တွင် တောင်ဘက်မှ လေတိုက်နှုန်းနှင့် လေထုစိုထိုင်းဆ မြင့်တက်လာပြီး မိုးရွာနိုင်မည့် အခြေအနေများဆက်လက်၍ ဖြစ်ပေါ်နေမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
Leaveacomment Uncategorized ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ် အရှေ့ပိုင်းမှ 99W နှင့် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင် အခြေအနေ
By mmweather.ygn, on June 25th, 2014%
အရှေ့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ်(INVEST 99W) စတင်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပြီး၊ အနောက်ဘက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားလျှက်ရှိပါသည်။
INVEST 99W 25 Jun 2014 0000Z Location: 10.0 131.1 Winds: 15 knots Central Pressure: 1010 hPa
ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်များတွင် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်၌ မုန်တိုင်း/လေဖိအားနည်းဆဲလ် ဖြစ်ပေါ်မည့် အခြေအနေမရှိပါ၊
ဇွန်လ ၂၇ ရက်နောက်ပိုင်းမှ ဇူလိုင်လဆန်းအထိ မုတ်သုံလေအား အနည်းငယ်ကျဆင်းနေနိုင်ပြီး ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းမှ ပြန်လည် အားကောင်းလာဘွယ်ရှိကြောင်း၊ ဖေါ်ပြပါရက်ပိုင်းအတွင်း ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် လှိုင်းရွေ့လျားမည့် အခြေအနေ၊ လှိုင်းအမြင့်တို့ကို ပုံများဖြင့် ဖေါ်ပြပေးထားပါသည်။
INVEST 99W ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် တည်နေရာနှင့် ကပ္ပလီပင်လယ်မြောက်ပိုင်း မုတ်သုံလေတိုက်ခတ်နေသည့် အခြေအနေ(အောက်ပုံ) . . . → Read More: ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ် အရှေ့ပိုင်းမှ 99W နှင့် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင် အခြေအနေ
Leaveacomment Uncategorized လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 06W-SIX ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on June 28th, 2013%
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်သို့ ဝင်ရောက်လာသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 99W သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း SIX(06W) အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Luzon ကျွန်းအား ဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာကာ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆း၃ဝ နာရီမတိုင်မီ မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်သို့ ရောက်လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း JTWC နှင့် TSR တို့မှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားပါသည်။
NRL မှ နောက်ဆုံး ရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း SIX(06W) ဖိလစ်ပိုင်အမည် GORIO သည် မနီလာမြို့တော် အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၆ဝဝ ခန့် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်တွင် တည်ရှိနေပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၅ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့် . . . → Read More: လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 06W-SIX ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တွင်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ 99W ဟိုင်နန်ကျွန်းမြောက်ဘက်မှကပ်၍ ကုန်းတွင်းသို့ ကျော်ဖြတ်လျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on June 15th, 2013%
ဇွန်လ ၁၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၅ ရက် ညနေ ၁၈၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသော လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 99W သည် ပိုမိုအင်အားကောင်းလာခြင်း မရှိပဲ တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအား Guangxi နှင့် Guangdong ပြည်နယ်နယ်စပ်အနီး၊ ဟိုင်နန်ကျွန်းမြောက်ဘက်မှ ကပ်၍ ဖြတ်ကျော် ရွေ့လျားလျှက်ရှိပါသည်။
JTWC ခန့်မှန်းချက်တွင် ကုန်းတွင်း လေဖိအားနည်းဆဲလ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလုနီးပါး အခြေအနေတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 99W သည် မြေပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှု အခြေအနေများကြောင့် မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေ ပိုမိုနည်းပါးသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေအဆင့် MEDIUM အဆင့်တွင် ဆက်လက်သတ်မှတ်ထားကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ပုံ(၁) ဇွန်လ . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ 99W ဟိုင်နန်ကျွန်းမြောက်ဘက်မှကပ်၍ ကုန်းတွင်းသို့ ကျော်ဖြတ်လျှက်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ INVEST 99w ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး မုန်တိုင်းငယ် ဖြစ်လာနိုင်
By mmweather.ygn, on June 14th, 2013%
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 99W သည် ယနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ အားပိုကောင်းလာပြီး အနောက်တောင်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁ဝ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပါသည်။ NRL မှ နောက်ဆုံးရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 99W သည် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဒါနန်းမြို့ အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင် ၄၁ဝ ခန့်၊ ဟောင်ကောင်မြို့တောင်ဘက် မိုင် ၂၈ဝ ခန့်၊ ဟိုင်နန်ကျွန်း၊ Haikou မြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၂၆ဝ ခန့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိနေပြီး ဗဟိုဖိအား 1010hPa မှ 1007 hPa သို့ ကျဆင်းလာပြီး ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း ၁၅ . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ INVEST 99w ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး မုန်တိုင်းငယ် ဖြစ်လာနိုင်
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် စတင်ဖြစ်ပေါ်
By mmweather.ygn, on June 12th, 2013%
ဇွန်လ ၁၂ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၆း၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL အချက်အလက်များအရ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဒါနန်းမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် ၃၈၅ မိုင်ခန့်၊ ဟောင်ကောင် ၏ တောင်ဘက် မိုင် ၅၈ဝ ခန့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် တစ်ခု – INVEST 99W စတင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း သိရပါသည်။ အဆိုပါ လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 99W သည် လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်းက အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၄ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့်ရွေ့လျားခဲ့ပြီး အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းရပါသည်။
လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 99W 12 Jun 2013 0000Z Location: 14.0 113.6 . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် စတင်ဖြစ်ပေါ်
Leaveacomment Uncategorized အပူပိုင်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ရောက်ရှိလာသည့် 07W(ဖိလစ်ပိုင်အမည် FALCON)
By mmweather.ygn, on June 22nd, 2011%
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ရောက်ရှိလာသည့် 07W(ဖိလစ်ပိုင်အမည် FALCON) – (ယခင်လေဖိအားနည်းဆဲလ် 99W)
99W Invest (လေဖိအားနည်းဆဲလ် အဆင့်မှ ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 07W အဖြစ်သို့ ဇွန်လ ၂၁ ရက် 1800Z(မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၁ ရက် ည သန်းခေါင်ယံ) တွင် စတင်ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ၄င်းလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 07W သည် မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားခဲ့ပြီး ယနေ့နံနက် 0000Z(မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီခွဲတွင် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
Tropical Storm 07W SEVEN
22 Jun 2011 0000Z Location: 13.6 128.5 Winds: 35 knots . . . → Read More: အပူပိုင်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ရောက်ရှိလာသည့် 07W(ဖိလစ်ပိုင်အမည် FALCON)
Leaveacomment Uncategorized အရှိန်မသေနိုင်သေးတဲ့ JAL – ပင်လယ် ၅ ခုဖြတ်ကျော်၍ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် ကုန်းတွင်းထပ်မံဝင်ရောက်
By mmweather.ygn, on November 12th, 2010%
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ အတွက်ပါ ဒီနှစ် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် မုန်တိုင်းရာသီဟာ ကုန်ဆုံးပြီလို့ ပြောနိုင်ပေမဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ Post မှာ သုံးသပ်တင်ပြထားသလိုပဲ ဆက်ပြီးတော့ စောင့်ကြည့်နေရဦးမှာပါ။ MMW မှ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း JAL(99W, 05B) ရဲ့ အခြေအနေကို စတင်ဖြစ်ပေါ်ချိန်မှ ပြီးဆုံးချိန်အထိ စောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့တဲ့ အခြေအနေအသေးစိတ်ကို စုဆောင်းရရှိသရွေ့ အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံပြီး လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ ဒီမုန်တိုင်းဟာ ထူးထူးခြားခြား ပင်လယ် ၅ ခုကို မိုင်ပေါင်း ၄ဝဝဝ ကျော်ဖြတ်သန်း ခရီးနှင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ မိုးလေဝသပညာရှင် မဟုတ်သူ အိုင်တီ ဝါသနာရှင်များအတွက်တော့ တကယ်ကို အံ့သြစရာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းက စ ပြီး မုန်တိုင်းဖြစ်လာတဲ့ . . . → Read More: အရှိန်မသေနိုင်သေးတဲ့ JAL – ပင်လယ် ၅ ခုဖြတ်ကျော်၍ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ် ကုန်းတွင်းထပ်မံဝင်ရောက်
Leaveacomment Uncategorized အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းငယ် JAL (05B) အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ကမ်းရိုးတန်းသို့ ဦးတည်နေ
By mmweather.ygn, on November 6th, 2010%
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိခဲ့သည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 99W သည် အပူပိုင်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းငယ် JAL (05B) အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာအိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ တမီးလ်နာဒူးပြည်နယ် ချင်နိုင်းမြို့ အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၄၃ဝ ခန့်အကွာ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုကိုးကျွန်း အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၅၆ဝ ခန့် အကွာသို့ ရောက်ရှိ ဗဟိုပြုလျှက်ရှိပါသည်။ မုန်တိုင်း JAL သည် အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိပြီး လာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း ပိုမိုအားကောင်းလာကာ အဆင့်-၂ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း JTWC, TSR data များအရ သိရှိရပါသည်။
လက်ရှိအခြေအနေအရ မုန်တိုင်း JAL သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တမီးလ်နာဒူးပြည်နယ်နှင့် အန်ဒရာပရာဒေ့ရှ် ပြည်နယ် ကမ်းရိုးတန်းသို့သာလျှင် ဦးတည်တိုက်ခတ်လျှက်ရှိပြီး . . . → Read More: အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းငယ် JAL (05B) အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ကမ်းရိုးတန်းသို့ ဦးတည်နေ
9 comments Uncategorized လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 99W အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလုနီး
By mmweather.ygn, on November 4th, 2010%
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 99W သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ဖြစ်လုနီးပါး အခြေအနေသို့ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းလေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဗဟိုတွင် လေတိုက်နှုန်း ၃ဝ နော်တီကယ်မိုင်(တစ်နာရီလျှင် ၃၅ မိုင်ခန့်) အထိရှိနိုင်ပြီး၊ ပင်လယ်ရေပြင်ညီလေဖိအား 1000 hPa သို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါသည်။ 99W သည် လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်းက အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီလျှင် ၁၂ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း၊ အန်ဒရာပရာဒက်ရ်ှပြည်နယ်၊ Chennai မြို့ အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် ၇၂ဝ မိုင်ခန့်၊ ကိုလ်ကတ္တားမြို့ တောင်ဘက် မိုင် ၉၂ဝ ခန့်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုကိုးကျွန်း တောင်-အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၃၉ဝ ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်အား ဗဟိုပြုနေပါသည်။
မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် . . . → Read More: လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 99W အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလုနီး